के नेपाली आमाका सन्तानहरु अन्तरीक्षमा पुग्लान त ? – बैज्ञानिक शाही « Niatra TV
के नेपाली आमाका सन्तानहरु अन्तरीक्षमा पुग्लान त ? – बैज्ञानिक शाही
धेरै आकाशगङा जहाँ खर्बौ तारा, करोडौं Asteroid, उपग्रह, लाखौं ग्रहहरु रहेका छन्। कुनै स्थानमा अहिले सम्म मानव जातिको अस्तित्व रहेको प्रमाण भेटिएको छैन तर अति सुन्दर, रमणीय वातावरण, मानव जातीक अस्तित्व रहेको एक मात्र ग्रह हो हाम्रो पृथ्वी ।
पृथ्वी देखि ९९.५ किलोमीटर माथी आकाश लाई अन्तरीक्ष(Space) भनिन्छ। जहाँ शुन्य वायुमण्डल, शुनशान, तिब्र तापक्रम, शुन्य गुरुत्व आकर्षण बल ( Gravity) रहेको छ। बैज्ञानिकहरुको लामो समय मिहेनत र अनुसन्धानले पछि पहिलो पटक मानव सहित स.न. १२ अप्रिल १९६१ मा Soviet Cosmonaut Yuri Gagarin (अन्तरिक्षान यात्री युरी गागरिन) लाई रूसले पठाएको थियो। अन्तरिक्ष यात्री लाई बस्न, समान राख्ने, इन्धन, खाना इत्यादी गर्नको लागि Mir Space Station(नेपाली भाषामा बुझ्नको लागि सानो घर) स.न. १९८६ मा Soviet Union ले बनाएको थियो जो पृथ्वी बाट झण्डै ३५८ किलोमिटर आकाशमा रहेको थियो भने ७.६९ किलोमिटर प्रति सेकेन्डका दर ले हाम्रो पृथ्वीलाई चक्कर लागाईरहेको थियो।
यो निर्माण गर्नको लागि जम्मा खर्च ४.२ बिलियन अमेरिकन डलर (करिब ५.५ अर्ब नेपाली रुपैया) रहेको थियो। बिज्ञान तथा प्रबिधिको तिव्र गति बिकासले स.न. २० नोभेम्बर, १९९८ (International Space Station ISS) अन्तरास्ट्रिय अन्तरीक्ष स्टेशन पृथ्वी बाट Russian Proton Rocket बाट अन्तरीक्ष(स्पेस) मा पठाएको थियो। जस्मा १५० बिलियन अमेरिकन डलर खर्च गरेको थियो। नेपालको कुल बजेट १३.७२ बिलियन अमेरिकन डलर हरेको छ (२०१९-२०२०) नेपालको आर्थिक कुल बजेट २०१९-२०२० को १०.९२ गुणा बढी खर्च लागेको थियो ISS निर्माण र स्थापना गर्न।
स.न.२००० देखि अन्तरिक्षन यात्री ISS मा बस्दै आईरहेका छन। यस्ले पृथ्वीको परिक्रम गर्न ९० मिनेट समय लगाउन्छ भने ४०८ किलोमीटर पृथ्वी देखि आकाशमा रहेको छ।
हाल सम्म कति अन्तरीक्ष यात्री अन्तरीक्षमा (स्पेस) मा गएका छन?
एक अन्तरीक्ष यात्री( Astronaut) को लागि कति खर्च हुन्छ अन्तरिक्षमा पठाउदा?
स.न.१९६० देखि यता बैज्ञानिकहरुको गन्तव्य अन्तरिक्षा का विभिन्न स्थान जस्तै (चन्द्रमा, मंगल ग्रह, Kepler-20e, इत्यादि) मानव जातिको वासस्थान गर्नको लागि बैज्ञानिक र Space Agency हरु रातदिन खटिरहेका छन् । हामी यत्ती सम्म ठुक्क हुन सक्छौं कि अब को ७०-९० बर्ष सम्म गरिब १० लाख मानिसहरु अन्तरिक्षमा र अन्य ग्रहमा हुने छन किन भने बिज्ञान तथा प्रबिधिको तिव्र गतिमा बिकास हुदैछ। त्यो बेला मानव जातिको लागि रोजाई, सुरक्षित स्थान ती ग्रह, उप-ग्रह हरु रहने छन् । त्यही भएर अहिले Space Agency र विकसित रास्ट्रहरु खर्बौ खर्च गरिरहेका छन् । पछिल्लो केही दशक देखि मानव जातिले अन्तरीक्षको बारेमा धेरै चासो राख्दै आईरहेका छन्। अहिले पृथ्वीको एक ट्रुक्र जमिनको पनि कारोबार भईराखेको छ भने अबको केहि दशक पछि ती ग्रह, उप-ग्रह हरु मा पनि यसरी कारोबार हुने कुनै दुई मत नै छै।
के नेपाल सरकारले अन्तरीक्ष अभियान तथा सस्था बनाउन सक्छ ?
अवस्य, तर नीति बनाएर कार्यवान मा ल्याउन धेरै परको कुरा हुने छ। अहिले सम्म नेपालमा कुनै पनि अन्तरीक्ष सम्बन्धित सरकरी निकाय छैनन् । Nepal Astronomical Society NASO ले अन्तरिक्ष सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम बनाएर अन्तरिक्ष सम्बन्धित चासो राख्ने युवाहरु लाई सम्मेलन तथा पाठन गर्ने काम गरि राखेको छ। अहिले को २१औं शब्दीक मा नेपाल सरकरले पनि Space Exploration र अभियान ल्याउनु पर्ने हो। गत २०७५ देखि मात्र नेपालमा BTech Aerospace Engineering पुल्चोकले ल्याएको छ सुरुवात त हुदै छ। अब नेपालले पनि चाडैं आफ्नै देशमा उत्पादन गरेका Aerospace Engineers हरु हेर्न पाउने छ। ९१.०१% अन्तरीक्ष यात्री हरु BTech बाट नै छन् ।
सायद, नेपाल सरकारले आफ्नै Space Agency अथवा सस्था बनाएर अन्तरीक्षमा Rocket पठाउन गरि ५०-६० बर्ष समय लाग्न सक्छ सुरुमा त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्यो त्यो भन्दा ठूलो कुरो आर्थिक भार हुन जान्छ एक पटक मात्र Rocket पठाउन, सस्था बनाउन गरिब नेपाल सरकारको २०१९-२० को कुल बजेट १० गुणा चाहिन्छ कहाँ बाट ल्याउने ?
खर्बै भस्ट्रचार भईराखेको छ दिन प्रतिदिन अनावश्यक खर्च बढीराखेको छ त्यो सबै लाई नियन्त्रण गरेर थोपा थोपा मिलेर समुन्द्र बन्छ भने झै ५० बर्ष लाग्ने लाई ५-१० बर्ष मै गर्न पनि सकिँदैन र ? नेपालमा अन्तरिक्ष सम्बन्धितको न त मन्त्रालय, न त विभाग नै छैन आखिर किन ?
अवश्य, अब को एक दशक भित्र नेपाली आमाको सन्तान पनि अन्तरिक्षमा जाने छन् तर धेरै चुनौतीहरु संग सघर्ष गर्नु पर्न आउने छ जस्तैः आर्थिक भार, साथ समर्थन, हौसला तथा प्रोत्साहन) उदाहरणको लागि नासाको अन्तरिक्ष यात्री हुनु भन्दा पहिला अमेरिका को नागरिक हुनु पर्छ सबै देशको नियम यस्तै छ। नेपालीआमा को नागरिता तोडेर अन्य देशको नागरिता लगेर अन्तरिक्षमा गएर नेपाली आमा लाई खुशी राख्ने छन् भन्ने हामी हरुले आशा गरौँ यो चाडैं देख्न र सुन्न पाईयोस। कसैले म नेपाली आमाको सन्तान हो म नेपाली रगत पनि अन्तरीक्षमा पुर्याउन चाहन्छु जस्तो सुखै परिस्थिति संग लडन तयारी छु भन्ने बहादुर छोरा/छोरी लाई राज्यले पुर्ण रुपमा साथ समर्थन हौसला तथा प्रोत्साहन साथै आर्थिक भौतिक हिसाब मा सहयोग गर्नु पर्छ। ब्याक्तिगत फाइदा नभएर रास्ट्रको पनि नाम इस्तिहासमा समाबेश हुने भएकोले सबै एकजुट भएर सहकार्य गर्नु पर्दछ।
युवा बैज्ञानिक वसन्त कुमार शाही, युवा बैज्ञानिक अवार्ड सन २०१७,पेरिस फ्रान्समा सम्मानित हुनु भएको हो ।